13 Deeq waxbarasho ee ugu sareysa UAE ee loogu talagalay dadka ajnabiga ah (Ardayda Caalamiga ah) 2022
Ma waxaad tahay qof shisheeye ah oo doonaya inuu wax ku barto UAE? Deeqdan waxbarasho ee Imaaraadka ee loogu talagalay ajaanibta (Ardayda Caalamiga ah) waxay gacan ka geysan doonaan maalgelinta waxbarashadaada sida arday caalami ah oo ku sii socda shahaadada jaamacadda UAE.
Isutagga Imaaraatka Carabta (UAE) waa federaal ka kooban toddobo imaaradood: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ummu Al-Quwain, Fujairah, iyo Ras Al Khaimah.
Dadka intiisa badani waxay wax ka ogyihiin oo keliya Dubai iyo Abu Dhabi waana tan sababta oo ah iyagu waa labada magaalo ee ugu waaweyn imaaradda, meelaha ugu dhaqsaha badan uguna dhaqsaha badan, waxayna soo jiitaan malaayiin ajaanib ah sannad kasta si ay ugu amraan baqdinta labada magaalo.
Dubai iyo Abu Dhabi waa goobo caan ah sidaa darteed waa iska caadi inaad aqriso tan si aad u ogaatid labadan magaalo oo aadan u ogaanin kuwa kale. Weli waxaad u baahan tahay inaad wax ka ogaato iyaga sidoo kale, maaddaama deeq-lacageedka aad u baahan tahay inaad dalbato laga yaabo in lagu xaddido oo keliya jaamacadaha ku yaal goobahaas.
Ha murugoon, meel kasta oo ka mid ah imaaraadku waa amaan waana xitaa darajada ugu sareysa mid ka mid ah meelaha ugu nabdoon ee lagu noolaado, laga shaqeeyo, wax laga barto, oo xitaa qoys lagu koriyo adduunka.
Sababtaas awgeed, dadka ka yimid waddammada kale, oo badankood ka socda waddamada soo koraya, waxay ku qulqulaan Imaaraatka sannad kasta maahan inay booqdaan oo keliya laakiin inay noqdaan qurbajoog maaddaama ay leedahay duruufo nololeed oo wanaagsan.
Qaar ka mid ah qurbajoogtan waxay sii wataan inay arday noqdaan kadibna ay si buuxda u degaan UAE.
1 Waa kuma Ardayga Ajaanibta ah?
2 Imaaraadku ma u fiican yahay ardayda caalamiga ah?
3 Sideen ku heli karaa waxbarasho bilaash ah UAE?
4 Deeqaha waxbarasho ee UAE ee loogu talagalay dadka ajaanibta ah
4.1 Deeqaha Cilmi-baarista Dhakhaatiirta ee Al Qasimi Foundation
4.2 Deeqaha Ardayda Caalamiga ah ee IMT, Dubai
4.3 Jaamacadda Emirates Aviation, Ku-Xigeenka Madaxa-Sare ee Deeqaha Caalamiga ah
4.4 Jaamacadda Imaaraatka Carabta (UAEU) Deeq waxbarasho oo caalami ah
4.5 Jaamacadda Khalifa Deeqaha Caalamiga ah
4.6 Deeqaha Caalamiga ah ee Jaamacadda Canadian, Dubai
4.7 Jaamacadda Middlesex ee deeqda waxbarasho ee caalamiga ah ee Dubai
4.8 Jaamacadda Dubai International Scholarship
4.9 Shahaadada Jaamacadeed ee Shahaadada Caalamiga ah ee Jaamacadda Zayed, UAE
4.10 Haweenka Jaamacadda Curtin ee Deeqda Injineerinka ee Ardayda Caalamiga ah, Dubai
4.11 Madaxweynaha Deeqaha Caalamiga ah ee Jaamacadda Khalifa, UAE
4.12 Abaalmarinta Caalamiga ah ee Maxamed Bin Zayed University ee Sirdoonka Artificial, UAE
4.13 Jaamacadda Imaaraadka Carabta (UAEU) Ph.D. maalgelinta Ardayda Caalamiga ah
Waa kuma Ardayga Ajaanibta ah?
“Expat” waa mid gaaban oo loogu talagalay qurbajoogta waana qof ka guuraya wadankiisa una guuraya mid kale inuu si joogto ah u joogo ama muddo dheer ah.
Marka, arday ajnabi ah waa arday ka guuray waddankooda una aadaya waddan kale, UAE isla markiiba, ujeeddooyin waxbarasho. Isku soo wada duuboo, arday ajnabi ah ayaa sidoo kale la mid ah ardayga caalamiga ah.
Ardayda ajaanibta ah ama ardayda caalamiga ah waxay u furan yihiin fursado waxbarasho oo kala duwan oo ay bixiso dowladda Imaaraadka, shakhsiyaad deeqsi ah, jaamacado (deeqaha waxbarasho ee gudaha), iyo aasaaska iyo ururada samafalka kale.
Deeqaha waxaa loogu talagalay inay soo jiidato ardayda kartida leh ee leh waxqabadka tacliinta sare ama ka soo jeeda saboolka saboolka ah inay yimaadaan UAE oo ay ku amraan waxbarashadooda tayada leh.
Imaaraadku ma u fiican yahay ardayda caalamiga ah?
Sidii aan horay u soo sheegay, Imaaraadku waa meel nabdoon oo nabdoon oo lagu nagaado iyo sidoo kale waxbarasho. Dadka maxalliga ah si wanaagsan ayey u jecel yihiin una soo dhoweeyaan shisheeyaha maadaama dhaqankoodu yahay inay daryeelaan dadka kale.
Imaaraadku waa mid ka mid ah meelaha ugu sareeya ee wax lagu barto ee loogu talagalay ardayda adduunka oo dhan waxayna noqotay goob waxbarasho oo caalami ah kulul maadaama jaamacado iyo koleejyo badan oo ku yaal waddamada ugu sareysa sida Canada, USA, Australia, iwm ay u sameynayaan xarumo ardayda caalamiga ah.
Si kastaba ha noqotee, meelaha sida Dubai iyo Abu Dhabi waa qaali in lagu noolaado maaddaama ay tahay bartamaha Imaaraadka laakiin sida arday ajnabi ah, wax walwal ah kama qabtid.
Muwaadiniintu runtii waa dad diirran dhaqankoodana, waxaa laguula dhaqmi doonaa xitaa si ka wanaagsan tan ay wataan.
Khidmadaha waxbaridda ayaa si isku mid ah ugu sarreeya jaamacadaha iyo kulliyadaha halkan ku yaal laakiin sidoo kale ma lihid wax aad ka walwasho, ka dib dhan, boostada aad aqrinaysaa waxay ku jirtaa deeqaha waxbarasho ee Imaaraadka ee loogu talagalay ajaanibta.
Deeqdani waxay u muuqan kartaa mid si buuxda loo maalgeliyey ama qayb ahaan la maalgeliyey, hadba kii aad hesho ayaa wali kaa caawin doona dhaqaale inta aad wax ku baraneyso Imaaraadka.
Sideen ku heli karaa waxbarasho bilaash ah UAE?
Waxaad ku heli kartaa waxbarasho bilaash ah UAE iyada oo loo marayo deeqo waxbarasho oo aad dalban doonto. Haa, ma taqaanid wali deeqaha waxbarasho waana tan maqaalkani kuu keenayo.
Waxaan ku leenahay Daraasadaha Dibadda ee Dibadda waxaan ku sameynay cilmi baaris ballaaran waxaanan kuu keenay 13 deeqo waxbarasho oo ku yaal Imaaraadka oo loogu talagalay dadka ajaanibta ah si ay kaaga caawiyaan xakamaynta khidmadaha waxbarashada. Waxaad sidoo kale nasiib u yeelan kartaa oo aad heli kartaa deeq-lacageed si buuxda loo maalgeliyo si ay kuugu waarto inta aad ku jirto shahaadadaada koowaad, jaamacadeed, iyo daraasadda qalin-jabinta.
Deeqaha ayaa ku habboon ardayda dhammaan barnaamijyada iyo heerarka waxbarasho, laakiin nidaamka dalabku had iyo jeer wuu kala duwanaan doonaa maadaama deeqaha waxbarasho ay bixiyaan hay'ado kala duwan. Iyada oo arrimahan oo dhan maskaxda lagu hayo, waad u sii socon kartaa inaad wax ka barato deeqaha waxbarasho ee Imaaraadka loogu talagalay ajaanibta iyo kuwa aad u qalmi karto.
Deeqaha waxbarasho ee UAE ee loogu talagalay dadka ajaanibta ah
Kuwa soo socda ayaa ah 13 deeqda waxbarasho ee ugu sareysa ee loogu talagalay ardayda ajaanibta ah ee dhammaan barnaamijyada iyo heerka daraasadda, waxay kala yihiin;
Deeqaha Cilmi-baarista Dhakhaatiirta ee Al Qasimi Foundation
Deeqaha Ardayda Caalamiga ah ee IMT, Dubai
Jaamacadda Emirates Aviation, Ku-Xigeenka Madaxa-Sare ee Deeqaha Caalamiga ah
Jaamacadda Imaaraatka Carabta (UAEU) Deeqaha Caalamiga ah
Jaamacadda Khalifa Deeqaha Caalamiga ah
Deeqaha Caalamiga ah ee Jaamacadda Canadian, Dubai
Jaamacadda Middlesex ee deeqda waxbarasho ee caalamiga ah ee Dubai
Jaamacadda Dubai International Scholarship
Shahaadada Jaamacadeed ee Shahaadada Caalamiga ah ee Jaamacadda Zayed, UAE
Haweenka Jaamacadda Curtin ee Deeqda Injineerinka ee Ardayda Caalamiga ah, Dubai
Madaxweynaha Deeqaha Caalamiga ah ee Jaamacadda Khalifa, UAE
Abaalmarinta Caalamiga ah ee Maxamed Bin Zayed University ee Sirdoonka Artificial, UAE
Jaamacadda Imaaraadka Carabta (UAEU) Ph.D. maalgelinta Ardayda Caalamiga ah
Mu'asasada Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi loogu talagalay Cilmi-baarista Siyaasadeed sanad walba waxay siisaa fursaddan deeqdan waxbarasho oo keliya Ph.D. musharrixiinta si ay u taageeraan aqoonyahannada marxaladda cilmi-baarista ee qoraalkooda.
Deeqdani waa mid lagu xaddidi karo jaamacad kasta oo la aqoonsan yahay oo ku taal Imaaraadka waxayna u furan tahay ardayda adduunka oo idil taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu sarreeya ee UAE.
Deeqda ayaa si buuxda loo maalgeliyey oo ka kooban duulimaadyada soo noqoshada, hoyga hal sano, kharashka nolosha, iyo taageerada cilmi baarista. Deeqdani waxay bartilmaameedsaneysaa aqoonyahannada leh karti tacliimeed oo xoog leh iyo karti ku aaddan baaritaanka la dabaqay.
The Machadka Farsamada Maamulka, Dubai waxay bixisaa deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda dooneysa inay raacaan barnaamijyada shahaadada koowaad iyo koowaad ee jaamacadeed.
Tani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee yar yar ee Imaaraatka loogu talagalay dadka ajaanibta ah ee ku baahsan dhammaan shahaadooyinka deeqaha waxbarashona waa toddobo tiro, kaliya waxay kaa sugayaan inaad dalbato.
Si aad u dalbato, ardayda danaynaysa waa inay soo gudbiyaan sharaxaad ku saabsan sababta ay u doonayaan inay dalbadaan deeq waxbarasho oo gaar ah oo ay u fuliyaan shuruudaha kale.
Jaamacadda Duulista Hawada wuxuu doonayaa inuu caawiyo dadka ajnebiga ah si ay u gaaraan hamigooda waxbarasho taas oo ah sababta ay u siiso deeqdan waxbarasho ardayda ajaanibta ah.
Deeqda gudoomiye ku-xigeenka ee ardayda caalamiga ah waxay daboolaysaa labadaba barnaamijyada shahaadada koowaad iyo kuwa qalin-jabinta waana la aqbali karaa oo keliya jaamacadda. Deeqdani qayb ahaan waa la maalgeliyaa waxayna kaliya dabooshaa 50% ee khidmadaha waxbarashada ardayga.
Deeqdani waxay u gudubtaa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee Imaaraadka ee loogu talagalay dadka ajaanibta ah, iyo abaalmarinta, ardayda caalamiga ah waxay awoodi karaan waxbarasho sare oo qiimo jaban.
Kahor intaadan bilaabin codsiga abaalmarinta, waa inaad iska diiwaangelisay shahaadada koowaad ee jaamacadeed ama shahaadada qalin-jabinta ee Jaamacadda Duulista Hawada.
Jaamacadda Imaaraatka Carabta (UAEU) Deeq waxbarasho oo caalami ah
The Jaamacadda Imaaraatka Carabta waxay siisaa fursado deeq waxbarasho ardayda caalamiga ah ee ku qoran barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Ardayda jaamacadda dhigata waxay dalban karaan abaalmarinno si buuxda loo maalgeliyey oo qayb ahaan la maalgeliyey, mid ka mid ah codsiyada badan ayaa ah in ardaydu leeyihiin aqoon heer sare ah.
Abaalmarinta si buuxda loo maalgeliyey waa qaab ah 100% ka dhaafida khidmadda waxbarashada oo dib loo cusbooneysiin karo illaa dhamaadka barnaamijka shahaadada koowaad ee ardayga.
In kasta oo abaalmarinta qayb ahaan la maalgeliyo ay tahay qaab ah ka-dhaafida khidmadda khidmadda 50% iyo sidoo kale waa la cusbooneysiin karaa illaa dhammaadka barnaamijka shahaadada koowaad ee ardayga illaa inta ardaygu u hoggaansamayo shuruudaha u-qalmitaanka.
Jaamacadda Khalifa (KU) waxay bixisaa a taxane ah deeq waxbarasho ardayda Imaaraadka Carabta iyo kuwa aan caalamiga ahaynba oo ay ku jiraan ajaanibteeda.
Deeqdan waxbarasho waxaa la siiyaa ardayda shahaadada koowaad iyo kuwa qalin-jabinta ka diiwaangashan barnaamij ka socda Jaamacadda Khalifa.
Deeqdani waxay ku jirtaa qaybo kala duwan, oo si buuxda loo maalgeliyey oo qayb ahaan la maalgeliyey, sidaas awgeed waxay la timid shuruudo kala duwan oo aad u baahan tahay inaad eegto ka hor intaadan dalban.
The Jaamacadda Kanada, Dubai waxay bixisaa deeqaha waxbarasho ee soo socda: Deeqda waxbarasho ee heer sare ee tacliinta, Deeqaha Isboortiga, Deeqda Dhibaatada Dhaqaalaha, Baahiyaha Gaarka ah ee Deeqda, iyo Deeqda Gaarka ah ee Gaarka ah
Deeqdan waxbarasho ayaa loo heli karaa ardayda ka socota dhammaan muwaadiniinta, oo ay ku jiraan ajaanibta ku sugan Imaaraadka taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu sarreeya UAE.
Dhammaan deeqaha waxbarasho waa la cusbooneysiin karaa illaa dhammaadka barnaamijka ardayga ee jaamacadda illaa iyo inta ay la socdaan shuruudaha cusboonaysiinta.
Ardaydu sidoo kale way dalban karaan in kabadan hal deeq waxbarasho haddii ay la kulmaan shuruudaha u qalmitaanka iyo haddii ardaygu uqalmo wax kabadan hal, waxaa lagu siin doonaa fursad aad ku doorato midka leh qiimaha ugu sareeya.
Deeqda waxbarasho ee caalamiga ah ee ka socota Jaamacadda Middlesex ayaa bixinaysa deeqaha waxbarasho ee ardayda ka socota dhammaan muwaadiniinta, oo ay ku jiraan ajaanibta si ay u bartaan shahaadada koowaad iyo barnaamijka qalin-jabinta dhinac kasta.
Abaalmarinta deeqda waxbarasho waxay bixisaa 20% khidmadda khidmadda waxbarashada oo ay weheliso xirmooyinka waxbarasho ee caalamiga ah sida khidmadaha waxbarashada, hoyga, fiisada, iyo caymiska caafimaadka.
Ardayda caalamiga ah iyo ajaanibta waxay u furan yihiin deeqo kale oo kala duwan si ay dhaqaale ahaan uga caawiyaan waxbarashadooda. Deeqaha waxbarasho way ka duwan yihiin sidaas awgeed waxay la yimaadaan shuruudo kala duwan oo aad u baahan tahay inaad dhex marto oo aad u dhaafto sidoo kale inaad hesho mid ama in ka badan abaalmarinta.
Expats waxay dalban karaan deeqdan waxbarasho iyo sidoo kale ardayda caalamiga ah, waxaa loogu talagalay ardayda ku qoran barnaamijka shahaadada koowaad ee Jaamacadda Dubai.
Abaalmarintani waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya deeqaha waxbarasho ee Imaaraadka Carabtas oo waxay siisaa lacag qayb ahaan waxbarashada inta ay wax ka baranayso jaamacadda.
Tani waa deeq waxbarasho oo kale oo sare oo laga helo Imaaraatka oo loogu talagalay dadka ajnebiga ah ee loogu talagalay kaliya ardayda dhigata shahaadada koowaad ee jaamacadda Zayed.
Waxaa a deeq waxbarasho loogu talagalay in lagu siiyo amniga dhaqaale ardayda heer sare ee tacliimeed. Abaalmarintu waxay daboolaysaa 50% khidmadaha wax lagu barto ardayda waxayna u tahay dhammaan qaybaha shahaadada koowaad ee jaamacadeed.
Iyada oo loo marayo deeqdan waxbarasho, ardayda ka socota meel kasta oo adduunka ah waxay ku amri karaan waxbarasho tayo leh dhimista 50% ee UAE.
The Haweenka Jaamacadda Curtin ee Deeqda Injineerinka waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugufiican UAE ee loogu talagalay dadka ajaanibta ah laakiin markan kaliya haweenka.
Deeqdan waxbarasho waxaa loogu talagalay inay ku dhiirrigeliso ardayda haweenka ah ee ka diiwaangashan injineernimada heerka koowaad ee Jaamacadda Curtin, Dubai.
Si aad ugu qalanto deeqdan waxbarasho, murashaxu waa inuu haystaa rikoodh tacliimeed sare oo heer sare ah oo xagga injineernimada ah ama xisaab ama maaddo saynis ah.
Tani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu sarreeya ee Imaaraatka ee ajaanibta, deeqda waxbarasho ee madaxweynaha waxaa bixiya Jaamacadda Khalifa oo loogu talagalay in lagu abaalmariyo ardayda tayo tayo sare leh.
Deeqdani waa mid aad u tartamaysa oo ay heli karaan oo keliya kuwa aan muwaadiniinta ahayn ee doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacadda Khalifa.
Si aad ugu qalanto deeqdan waxbarasho, waa inaadan ka imaanin UAE, ugu yaraan CGPA ee 3.3 ama ka sareysaa, oo aad iska diiwaangelisaa injineerinka sannadka koowaad ama barnaamijka shahaadada sayniska ee Jaamacadda Khalifa. Deeqdani waxay daboolaysaa 50% - 100% kharashka waxbarashada.
Si loo dhiirrigeliyo loona caawiyo ardayda inay ku raaxaystaan ​​waxbarasho tayo leh, Jaamacadda Maxamed Bin Zayed waxay bixisaa kaalmo dhaqaale ardayga doonaya inuu qaato mastarka ama Ph.D. barnaamijka xarunta.
Deeqdani waxay uqalaneysaa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu sareeya ee UAE ee loogu talagalay dadka ajaanibta ah iyada oo si buuxda loo maalgeliyey oo daboolaya khidmadaha waxbarashada, gunnada bil kasta, hoyga, caymiska caafimaadka, iyo tikidhka duulimaadka sanadlaha ah.
Abaalmarinta waxaa loogu talagalay Master ama Ph.D. ardayda leh waxqabadka akadeemiyadeed ee gaarka ah ee ka diiwaangashan barnaamijka mastarka ama dhakhtarnimada ee Sirdoonka Artificial.
Jaamacadda Isutagga Imaaraatka Carabta (UAEU) waxay mar kale siisaa abaalmarin kale deeq waxbarasho oo loogu talagalay qurbajoogta, laakiin markan loogu talagalay ardayda dhigata shahaadada koowaad.
Waxaa loogu talagalay in lagu qoro ardayda leh waxqabad tacliimeed oo xoog leh dhammaan qaybaha adduunka mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadeeda jaamacadeed.
Abaalmarinta deeqda waxbarasho waxaa loogu talagalay in lagu soo jiito ardayda qalin jabisa ee heer sare ah si ay u sii wadaan barnaamijka dhakhtarnimada ee UAEU oo ku saabsan deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo. Faa'iidooyinka deeqdani waa ka-dhaafitaan waxbarasho oo buuxa, gunno bille ah, caymis caafimaad, iyo gunno AED 2,000 - AED 3,000.
Kuwani waa 13-ka deeqo waxbarasho ee laga heli karo UAE ee loogu talagalay ajaanibta, ardayda caalamiga ah si isku mid ah ayey u codsan karaan laakiin waxay raacayaan qawaaniinta iyo tilmaamaha mid kasta oo ka mid ah deeqda waxbarasho. Khadadka isku xidhka ayaa loo diyaariyey si ay cilmi-baaristaadu ugu fududaato. Nasiib wacan.
Deeqaha Ardayda Caalamiga ah ee Yurub
Ka hooseeya Deeqaha waxbarasho Deeqda Masters Deeqaha PhD Deeq waxbarasho oo diblooma ah Talooyinka deeqaha waxbarasho Barashada Hagaha Dibadda Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
deeqaha waxbarasho ee Imaaraadka ee loogu talagalay ajaanibtadeeqaha waxbarasho ee UAE ardayda caalamiga ah
Previous Post:Sida loogu guuleysto deeqda waxbarasho ee Trudeau Foundation Kanada - PhD
Post Next:16 Dibloomada Sare ee Shahaadada Sare ee Maareynta Barashada Fogaanta